Amathiphu Okubaluleka Ngendlela Ongasebenzisa Amazwibela, I-Alt Text Futhi Izincazelo Zokukwenza Ibhizinisi Lakho Lama-intanethi liphumelele
Uma kuziwa ekushicileleni iwebhu, ukubaluleka kwezithombe akukwazi ukufakwa. Ukuqalisa umkhankaso woku-intanethi, umzuzu owengeziwe wesikhathi sakho ungakulethela izivakashi zangempela futhi uthathe ukunakekelwa kwabafundi bakho ngokuphelele. Ukwengeza izithombe ezikhangayo kokuqukethwe kwakho kudlala indima ebalulekile ekwandiseni ukubandakanyeka komsebenzisi nokuhlangenwe nakho kwakho - surveillance equipment london uk. I-WordPress inikeza abamemezeli bewebhu ithuba lokufaka izithombe ezikhangayo ekuqukethwe kwabo. Futhi, ukubandakanya izethameli zakho ngokwanele ngokusebenzisa izincazelo zemethadatha, amazwibela, nezithombe zibaluleke kakhulu uma kuziwa ekushicileleni iwebhu. Lapha, uJason Adler, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, ukunika ithuba lokubuka izici ezilandelayo ze-WordPress:
Uma kuziwa ekushicileleni kwewebhu, amazwibela athandiswa kakhulu ngaphansi kwezithombe. Noma kunjalo, ukubekwa kwegama-ncazo kuncike esihlokweni esasetshenziswa umshicileli. Njalo okuthunyelwe okudalwe kuhlanganisa amagamabela athize okufanele ahluke kwabanye. Uma kuziwa ku-WordPress, amazwibela ayengezwa ngokusebenzisa ama-shortcodes. Ukuhambisa izithombe ngamazwibela ku-editor ebonakalayo kuyinkimbinkimbi. Ukuhambisa amazwibela, kuzodingeka ukwenze lokho kusuka kukhodi yokufaka. Ukubaluleka kwamagama-ncazo akunakunakwa uma kuziwa ekushicileleni iwebhu. Ukuqaphela ukuthi ungasebenzisa izixhumanisi ze-HTML kumazwibela wakho we-WordPress okubaluleke kakhulu.
Isihloko sithatha indima ebalulekile ukumaketha kokuqukethwe . Isihloko sichaza ukuthi ukufaka okunamathiselwe kufaka phakathi. Njengomshicileli, ungasebenzisa isihloko ukucinga ulwazi olufanele noma izithombe ku-yakho amafayela wegalari.Sebenzisa izinketho ezithuthukisiwe eziqukethwe ngaphansi kwemininingwane yesithombe ukwengeza izimfanelo zesithombe ezithombeni.
Umbhalo we-Alt ungenye imininingwane yokunamathiselwe esetshenziswa kakhulu ngabashicileli bewebhu. I-Alt Isici akufanele isetshenziswe ngaphansi kokuqukethwe kokuqukethwe. I-Alt Text yidatha yokunamathisela ekhombisa lapho isithombe singakwazi ukuvula. Nazi imithetho elawula ukusetshenziswa kwe-Alt Text ku-WordPress. Uma isithombe sinamathele ngezinhloso zomhlobiso, ithegi ye-altare yesithombe ingashiywa ingenalutho. Uma isithombe sinamathiselwe ngezinjongo zokuxhumana, i-Alt Text kufanele ichaze ngokugcwele okuqukethwe okuthunyelwe umshicileli.
Uma isithombe sitholakala kusixhumanisi, i-Alt Attribute kufanele ichaze isixhumanisi sokuchazwa njengomshicileli; Incazelo iyisici okufanele ungalokothi uphuthelwe ukuyisebenzisa. Uma omunye wezivakashi zakho ezingahle echofoza ekhasini lokuthunyelwe okunamathiselwe, isivakashi kufanele sibone incazelo yakho ende nenhloko yakho. Abashicileli abasebenzisa incazelo bangasebenzisa ifomethi ye-HTML bese beklama okuthunyelwe kwabo kokuhamba kalula. Imithelela yemethadatha ekushicilelweni kwewebhu kwe-Alt Attributes, amazwibela, izincazelo, neziqu yizici ezisetshenziswa kakhulu ngabashicileli bewebhu. Imethadatha ithuthukisa ukubonakala komkhankaso wakho we-intanethi, ithuthukisa isipiliyoni sakho, futhi ithuthukise ukuzibandakanya. Isibonelo, ukungeza isithombe se-WordPress ku-Google kungenza ube nesilinganiso esiphakeme kulezi zindlela zokuhlela. Ngokubuyisela, izivakashi zendawo zingakwazi ukufinyelela ngaphandle kwenkampani yakho ngendlela efanele. Ukuqonda ukubaluleka kwemininingwane yokunamathisela nokuthi i-WordPress isebenzisa kanjani imethadatha namagama-ncazo kuyimfuneko ebalulekile. Imininingwane yokunamathiselwe nayo inganakwa futhi isetshenziswe uma kuziwa ekushicileleni iwebhu. Setha izimfanelo ze-alt, imethadatha, amazwibela, nezincazelo ngokunembile ngomkhankaso wakho wezithombe ukukhulisa abasebenzisi isipiliyoni nokuzibandakanya